ထမင်းပေါင်းအိုး နဲ့ ငါးသလောက် ပေါင်းနည်း – ရှအေလငျး
ထမင်းပေါင်းအိုး နဲ့ပေါင်းတာပါ …အရမ်းလွယ်ပါတယ်
ငါးသလောက် ကို လိုသလိုတုံး။ဆေးကြောသန့်စင်ပြီးရင် ဆား ဆနွင်း ငံပြာရည် သကြား ထည့် ရှောက်သီးကိုအရည်ညှစ်ပြီးထည့် နယ်ပြီးနှပ်ထားပါ
။ပေါင်းမမယ့် အိုး ထဲမှာ ဇပလင် ကိုအနေတော်ဖြတ်ထည့်ပြီး ဒါးပြားရိုက်ပြီးခင်းပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီး ငါးလုံးကိုလည်း လေးစိတ် စိတ်ပြီးခင်း အဲ့ အပေါ်ကနေမှ ငါးတွေကိုနေရာချ။ရေ နည်းနည်းထည့်ပြီး ပေါင်းပါတယ် ရေ ခမ်းရင် တော့ ငါးမြုတ်ရုံ ထည့်ပေးပါတယ်
ရေထည့်တဲ့ အခါ ငါးအပေါ်ကိုလောင်းမထည့်ပါနဲ့..ဘေးကနေ ညင်ညင်သာသာလောင်းထည့်ပေးပါ….လေးကြိမ်လောက်ထည့်ပြီးရေခမ်းရင်အရိုးလည်း
နူးလောက်ပါပြီ။ ကြက်သွန်ဥ လေးတွေထည့် ..ရေထပ်ထည့်ပြီး ဆူအောင်တည်..။အရိုး နူးမနူးလည်းစစ်ပါ ။အရိုးနူးလောက်ပြီဆိုရင် ဒယ်အိုး တအိုးထဲမှာဆီကိုဆူနေအောင်တည်.
.ငြုပ်သီးလေးတောင့်လောက်ကို ညက်အောင်ထောင်းပြီး ဆီသတ် ။ ဆီသတ် ရင် ရေ လေးနည်းနည်းထည့်ပြီးသတ်ပါ ။ငြုပ်သီးလည်းမတူးသလို အရသာ လည်းပိုကောင်းပါတယ်။
ပြီးရင်အအေးခံပြီး ငါးသလောက် အိုး ထဲထည့်ပါ။ ရေခမ်းပြိးဆီပြန်လာရင် အရသာရှိရှိသုံးဆောင် နိုင်ပါပြီ။ ကြာချိန် (2) နာရီမှ (4)နာရီအတွင်းဖြစ်ပါတယ်
Credit to Thura Zin
ထမငျးပေါငျးအိုး နဲ့ပေါငျးတာပါ …အရမျးလှယျပါတယျ
ငါးသလောကျ ကို လိုသလိုတုံး။ဆေးကွောသနျ့စငျပွီးရငျ ဆား ဆနှငျး ငံပွာရညျ သကွား ထညျ့ ရှောကျသီးကိုအရညျညှဈပွီးထညျ့ နယျပွီးနှပျထားပါ
။ပေါငျးမမယျ့ အိုး ထဲမှာ ဇပလငျ ကိုအနတေျောဖွတျထညျ့ပွီး ဒါးပွားရိုကျပွီးခငျးပါတယျ။
ခရမျးခဉျြသီး ငါးလုံးကိုလညျး လေးစိတျ စိတျပွီးခငျး အဲ့ အပျေါကနမှေ ငါးတှကေိုနရောခြ။ရေ နညျးနညျးထညျ့ပွီး ပေါငျးပါတယျ ရေ ခမျးရငျ တော့ ငါးမွုတျရုံ ထညျ့ပေးပါတယျ
ရထေညျ့တဲ့ အခါ ငါးအပျေါကိုလောငျးမထညျ့ပါနဲ့..ဘေးကနေ ညငျညငျသာသာလောငျးထညျ့ပေးပါ….လေးကွိမျလောကျထညျ့ပွီးရခေမျးရငျအရိုးလညျး
နူးလောကျပါပွီ။ ကွကျသှနျဥ လေးတှထေညျ့ ..ရထေပျထညျ့ပွီး ဆူအောငျတညျ..။အရိုး နူးမနူးလညျးစဈပါ ။အရိုးနူးလောကျပွီဆိုရငျ ဒယျအိုး တအိုးထဲမှာဆီကိုဆူနအေောငျတညျ.
.ငွုပျသီးလေးတောငျ့လောကျကို ညကျအောငျထောငျးပွီး ဆီသတျ ။ ဆီသတျ ရငျ ရေ လေးနညျးနညျးထညျ့ပွီးသတျပါ ။ငွုပျသီးလညျးမတူးသလို အရသာ လညျးပိုကောငျးပါတယျ။
ပွီးရငျအအေးခံပွီး ငါးသလောကျ အိုး ထဲထညျ့ပါ။ ရခေမျးပွိးဆီပွနျလာရငျ အရသာရှိရှိသုံးဆောငျ နိုငျပါပွီ။ ကွာခြိနျ (2) နာရီမှ (4)နာရီအတှငျးဖွဈပါတယျ
လိပ်ခေါင်းသွေးပါနေသူများအတွက်.. (၇) ရက်နဲ့ ပျောက်ကင်းသွားစေမည့် …လွယ်ကူသည့် …ဆေးနည်း
ဦးကင်း ဆုံးရတာ ရောဂါကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ ဇနီးဖြစ်သူပြော
အရမ်းပျော်နေကြ တဲ့ အသစ် စက်စက်လင်မယားနှစ်ယောက် ရဲ့ မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့တွေကြားထဲက ရင်နာစရာ လက်ဖွဲ့တစ်ခု
ကျော်ကျော်နန္ဒရဲ့ အကယ်ဒမီပွဲတက် ဖက်ရှင်
ကိုးရီးယားမှာ လူကြိုက်များနေတဲ့ အမဲသား အစိမ်းလိုက်စားပြပြီး Live...